Iindaba -Sukuyijongela phantsi i-titanium dioxide ekwingubeni
1. Indima ye-titanium dioxide kwimpahla
Iingubo zenziwe ngokukodwa ngamacandelo amane: izinto ezenza ifilimu, i-pigment, i-solvents kunye nezongezo. Le mibala kwi ukutyabeka unamandla ezithile zokufihla. Ayinakugubungela kuphela umbala wokuqala wento egutyungelweyo, kodwa ikwanika ukutyabeka umbala oqaqambileyo. Qaphela umphumo wokuhombisa ukukhanya kunye nokuhombisa. Kwangelo xesha, i-pigment idityaniswe ngokusondeleyo kunye ne-arhente yokuphilisa kunye ne-substrate, kwaye idityanisiwe, inokukhulisa amandla oomatshini kunye nokubambelela kwifilimu yokuthambisa, kuthintele ukuqhekeka okanye ukuwa, kwaye kunokwandisa ubukhulu befilimu yokuthintela, ukuthintela Ukungena kwemitha yelanga okanye ukufuma, kunye nokuphucula ukutyabeka. Iimpawu zokulwa ukwaluphala kunye nokuqina kwefilimu kwandisa ubomi benkonzo yefilimu kunye nento ekhuselweyo.
Kwi-pigment, isixa sombala omhlophe sikhulu kakhulu, kunye neemfuno zomsebenzi wokwaleka kombala omhlophe: itUkukhanya okumhlophe; GrUkusila okuhle kunye nokumanzi; Ukumelana nemozulu elungileyo; Uzinzo lweekhemikhali olulungileyo; Ubungakanani be-particle encinci, ukufihla amandla kunye nokulahleka kwamandla ombala ophezulu, ukukhanya okuhle kunye ne-gloss.
I-Titanium dioxide luhlobo lombala omhlophe osetyenziswa kakhulu kwityathanga. Iziphumo zayo zibalelwa ngaphezulu kwe-70% yee-pigment ezingaphiliyo, kunye nokusetyenziswa kwayo zi-akhawunti ye-95.5% yokusetyenziswa kwe-pigment emhlophe. Okwangoku, malunga neepesenti ezingama-60 zetitanium dioxide esehlabathini isetyenziselwa ukwenza izinto ezahlukeneyo zokuhombisa, ngakumbi i-rutile titanium dioxide, uninzi lwayo lusetyenziswa lushishino lokutyabeka. Ipeyinti eyenziwe nge-titanium dioxide inemibala eqaqambileyo, amandla afihliweyo aphezulu, amandla okupeyinta anamandla, idosi ephantsi, kunye neendidi ezininzi. Ikhusela uzinzo oluphakathi, kwaye inokukhulisa amandla oomatshini kunye nokubambelela kwifilimu yepeyinti, kuthintele iintanda, kunye nokuthintela imitha ye-ultraviolet. Ingena emanzini kwaye yandisa ubomi befilimu yepeyinti. Umbala ohambelana phantse nayo yonke ipateni kwepeyinti enepateni emibalabala ayinakwahlulwa kwi-titanium dioxide.
Iindidi ezahlukeneyo zokwaleka ngeenjongo ezahlukeneyo zineemfuno ezahlukeneyo zetitanium dioxide. Umzekelo, ukugqunywa ngomgubo kufuna ukusetyenziswa kwe-rutile titanium dioxide enokuhanjiswa okufanelekileyo. I-Anatase titanium dioxide inamandla asezantsi okuphelisa kunye nomsebenzi oqinileyo we-photochemical. Xa isetyenziselwa ukutyabeka umgubo, ifilimu yokutyabeka ithambekele ekubeni tyheli. I-rutile titanium dioxide eveliswe yindlela ye-asidi yesulfuric inezibonelelo zexabiso eliphakathi, ukusasazeka okuhle, amandla afihlakeleyo okufihla kunye namandla okunciphisa umbala, kwaye ilungele kakhulu ukutyabeka umgubo ngaphakathi. Ukongeza ekusasazekeni okuhle, ukufihla amandla kunye nombala wokunciphisa amandla, i-titanium dioxide kwizambatho zangaphandle zomgubo ezifuna imozulu elungileyo. Ke ngoko, i-titanium powder yokugubungela umgubo ongaphandle ngokubanzi yi-rutile titanium dioxide eveliswa kukuhlanjwa.
2. Uhlalutyo lwempembelelo yokuguquguquka komgangatho ophambili we-titanium dioxide kwizambatho
I-Titanium dioxide isetyenziswa njenge pigment emhlophe yokupeyinta. Ubumhlophe bayo bubaluleke kakhulu kwaye yenye yeempawu eziphambili zomgangatho ofunekayo ngokubhotywa. Ubumhlophe obubi be-titanium dioxide buya kuchaphazela ngokuthe ngqo ukubonakala kwefilimu yokutyabeka. Eyona nto ichaphazela ubumhlophe be-titanium dioxide luhlobo kunye nomxholo wokungcola okuyingozi, kuba i-titanium dioxide inovakalelo kakhulu kubumdaka, ngakumbi i-rutile titanium dioxide.
Ke ngoko, nokuba lixabiso elincinci lokungcola kuya kuba nefuthe elibonakalayo kubumhlophe beetanium dioxide. Ubumhlophe be-titanium dioxide eveliswe yinkqubo ye-chloride ihlala ibhetele kunaleyo iveliswa yinkqubo ye-asidi yesulfuric. Kungenxa yokuba imathiriyeli eluhlaza ye-titanium tetrachloride esetyenziswe kwimveliso ye-titanium dioxide yinkqubo ye-chloride iye yachithwa yaza yahlanjululwa, kwaye umxholo wayo wokungahlambuluki ungaphantsi, ngelixa inkqubo ye-sulfuric acid isebenzisa Izinto ezingavuthiyo zinomxholo wokungcola okuphezulu, onokuthi kuphela isuswe ngokuhlamba kunye neendlela zokufaka iblich.
2 ukufihla amandla
Amandla okufihla yindawo engaphezulu kwento egutyungelwe isentimitha yesikwere. Xa igqunyiwe ngokupheleleyo, loo ndawo inye ipeyintiwe. Okukhona amandla okufihla i-titanium dioxide esetyenzisiweyo, kokukhona umboniso bhanyabhanya ungaphantsi, ubuncinci bepeyinti efunekayo, lincinci inani le-titanium dioxide efunekayo, ukuba amandla okufihla e-titanium dioxide ayancipha, ukuze ukufikelela kwisiphumo esifanayo sokugubungela, inani le-titanium dioxide elifunekayo elonyukayo, indleko zokuvelisa ziya kunyuka, kwaye ukonyuka kwenani le-titanium dioxide kuya kubangela ukuba i-titanium dioxide ekutyabeka Kunzima ukusasaza ngokufanayo, kwaye ukudityaniswa kwenzeka, okuya kuthi ichaphazela umphumo wokugubungela ukutyabeka.
3 ukumelana nemozulu
Iingubo zifuna ukumelana nemozulu ephezulu ye-titanium dioxide, ngakumbi kwizambatho zangaphandle, ezifuna ukumelana nemozulu ephezulu okanye ukumelana nemozulu ephezulu. Sebenzisa i-titanium dioxide enokumelana nemozulu ephantsi, ifilimu yokutyabeka iya kuba neengxaki ezinjengokubuna, ukutshintsha kombala, ukutsha, ukuqhekeka kunye nokuxobuka. Ubume bekristale be-rutile titanium dioxide buqinile kunalowo we-anatase titanium dioxide, kwaye umsebenzi wayo we-photochemical usezantsi. Ke ngoko, uxhathiso lwemozulu luphezulu kakhulu kunolo lwe-anatase titanium dioxide. Ke ngoko, i-titanium dioxide esetyenziselwa ukutyabeka sisiseko se-rutile titanium dioxide. Eyona ndlela iphambili yokuphucula ukuxhathisa kwemozulu ye-titanium dioxide kukunyanga umphezulu womhlaba, oko kukuthi, ukunxiba enye okanye ezingaphezulu ii-oxide ezingaphiliyo okanye i-hydrated oxides kumphezulu weetanium dioxide amasuntswana.
I-Titanium dioxide ngamasuntswana acocekileyo anendawo enkulu ethile kumphezulu kunye namandla aphezulu kumphezulu. Kulula ukudibanisa phakathi kwamasuntswana kwaye kunzima ukusasazeka ngokuzinzileyo kwipeyinti. Ukusasazeka okungafanelekanga kwe-titanium dioxide kuya kuchaphazela ngokuthe ngqo iipropathi zayo ezibonakalayo njengokuncitshiswa kombala, ukufihla amandla kunye nokubengezela komphezulu kwengubo, kunye nokuchaphazela uzinzo lokugcina, ukubhobhoza, ukulinganisa, ukuhlala ixesha elide, kunye nokumelana nengubo. Iipropathi zesicelo ezinje ngokuqhutywa kombane kunye nokuqhutywa kwezinto ziya kuchaphazela neendleko zemveliso zokwaleka, kuba ukusetyenziswa kwamandla kokugaya nokusasaza kuphezulu, ukubalwa kwemali kusetyenziso lwamandla onke lwenkqubo yokuvelisa, kunye nelahleko yezixhobo inkulu .
Ibango le-titanium dioxide liyenyuka kulo nyaka, ngakumbi kwi-titanium dioxide esetyenziswa kwishishini lokubhabha nge-lithium-ion, ekufuneka ixhomekeke ekungenisweni elizweni. Njengokuhla kwe-titanium dioxide, ukutyabeka kuchaphazeleka kwisaqhwithi sendalo, kwaye inani elikhulu lamashishini amancinci naphakathi avaliwe. Kwixa elizayo, inani le-titanium dioxide kwintengiso yokwaleka nayo iya kuncipha.